ब्रान्ड 'सही' र कलंकको सावधानीपूर्वक योजनाबद्ध मार्केटिंग रणनीति: मार्टिन भ्रिजल्यान्ड
मा दायर समाचार विश्लेषण	by मार्टिन भिजल्याण्ड	4 अक्टोबर 2019 मा	•4टिप्पणिहरु
खतरनाक आपराधिक मोटरसाइकल गिरोहहरू जसले सबैलाई मार्छ, मोक्रो माफिया, पार्ल र टेलिग्राफमा हमला गर्दछ (कम्तिमा त्यो आवश्यक छ) छविहरूले हामीलाई विश्वास दिलाउँछ)। 'ईयू र एन्टि-ग्लोबलाइजेशनबाट' बनाम 'पूरा ग्यास अगाडि केन्द्रीकरणतर्फ'। मौसम अस्वीकार बनाम 'हामी 12 वर्ष भित्र यो प्राप्त गर्नेछौं'। इस्लामीकरणको बिरूद्ध राष्ट्रवादी। नक्कली समाचार अभियुक्तहरू विरूद्ध मिडिया विश्वासिहरू। हामी ध्रुवीकरण र महान मार्केटिंग को माध्यम बाट निर्माण ब्रान्ड निर्माण को साक्षी छौं। 'दायाँ' ब्राण्ड जातिय भेदभाव, इस्लामविरोधी, मित्रैलो महिला, एन्टी GretaThumberg, EU विरोधी EU र षड्यन्त्र सिद्धान्तहरु मा विश्वास गरी जोडिएको छ। यो एक ग्लोबल खेल हो जहाँ 'दायाँ' ब्राण्ड ट्रम्प, ब्रेक्सिट बोरिस, थियरी बाउडेट, मरीन लेपेन, र यस्तैमा जोडिएको छ।
यसलाई ब्रान्डमा परिणत गर्दै, मिडियाले समाचारलाई 'दायाँ' मा महत्वपूर्ण आँखाका साथ सबैलाई कलंक दिन्छ। "ओह, तपाईं त्यस्ता 'जलवायु इनकार' हुनुहुन्छ" वा "ओह, तपाई त्यस्ता व्यक्ति हुनुहुन्छ जुन आधिकारिक 911 व्याख्यानमा विश्वास गर्दैन"। यसलाई ब्रान्डि called भनिन्छ।
मिडियाले होशियारीका ब्रान्डलाई 'थ्रीरी बाउडेट, रोबर्ट जेन्सेन, जर्ज भ्यान हौआउट्स' जस्ता प्यादहरू मार्फत जलायो। तपाईं सबैको लागि स्पष्ट रूपमा देख्न मिल्ने ब्रान्ड निर्माण गर्नुहुन्छ र त्यसपछि तपाईं अर्थतन्त्रलाई क्र्यास हुन दिनुहुन्छ। मैले लामो समयदेखि नै भविष्यवाणी गरिरहेको छु र त्यो हो कि समाजबाट गरिएको आलोचना पनि बदल्नु पर्छ। त्यसकारण 'दायाँ' लाई स्पटलाइटमा केही समयको लागि अनुमति दिइयो, किनकि ब्रान्ड स्पष्ट रूपमा परिभाषित गर्नुपर्‍यो, कि यदि त्यो अर्थव्यवस्था क्र्यास हुन्छ भने, सबैजनाले त्यो समूहलाई गिल्ला गर्नेछन् र थूक गर्दछन्।
ती सबै व्यक्तिहरू जुन 'दायाँ' (ब्रान्डको मिडिया र राजनीतिमा शीर्ष कलाकारहरू द्वारा निर्मित) को एक विशेषता रहेको छ, यस बीचमा ब्रान्डको 'स्पष्ट' को स्पष्ट रूपमा देख्न सकिने 'यहूदी स्टार' लगाउँछ। यदि ब्रान्डमा सबै चीजको विफलता राख्न सकिन्छ भने त्यो ब्रान्ड बाहिर खडा हुनेछ। कृपया नोट गर्नुहोस्: त्यो असफलता (कि आर्थिक क्र्यास) योजनाबद्ध छ र समन्वित ढ struct्गले संरचना भएको छ। त्यसकारण ट्रम्पले युद्धको युद्ध गर्‍यो र यसैले ब्रेक्सिटको पराजय। यो सबै लामो छ अग्रिम योजना बनाईएको!
'दायाँ' ब्रान्डलाई सावधानीपूर्वक निर्माण गर्नुपर्‍यो र पछि फुलायो, ​​ताकि भविष्यमा कसैले पनि पुरानो स्थापित अर्डर र भूमण्डलीकरणको मार्गचित्रको आलोचना गर्न नपरोस्। त्यो समूह पट्टि छ र असफलताको लागि खडा हुने सबै कुरामा दोषी छ। हामी विश्वव्यापी रूपमा निर्देशित मार्केटि campaign अभियानको अन्तमा समाजबाट गरिएको आलोचनाको सामना गर्न गइरहेका छौं। यदि तपाईं आलोचक हुनुहुन्छ भने, त्यसोभए तपाईं 'ठीक' हुनुहुन्छ र तपाईं त्यो समूहको हुनुहुन्छ। No! त्यो ब्रान्ड मिडिया र राजनीतिले निर्माण गरेको हो। भाग लिनुहोस्। राजनैतिक सुरक्षा जालमा नपर्नुहोस् जुन तपाईंलाई त्यो ब्रान्डमा राख्न खोज्छ। Bauet र Robert जेन्सेन जस्ता नियन्त्रण प्यादे को लागी नगर्नुहोस्। 'दायाँ' ब्रान्ड र ध्रुवीकरणबाट दूरी लिनुहोस्!
राजनीति र मिडिया जनतामा खेल्छन्। पछाडि कुनै थप धक्के छैन। यस हगमा ती सबै ट्र्याक्टरहरू सुन्न पाउँदा खुशी लाग्यो, तर यो सबै राम्ररी समन्वय गरिएको, नियन्त्रित र encapsulated। वास्तविक परिवर्तन राजनीति र मिडियालाई वैधता नदिन र उनीहरूलाई आवाज नदिएको हो।
ट्याग: विरोधी, Brexit, साजिश विचारकर्ता, विशेष, वैश्वीकरण, व्यापार युद्धहरू, ब्रान्ड, राष्ट्रवाद, दायाँ, महिला मित्रैलो
4 अक्टोबर 2019 मा 16: 06
बाँयामा नयाँ फासिज्म छ ..
5 अक्टोबर 2019 मा 00: 22
हामीलाई भनिएको छ कि यो संसार खराब छैन भनेर विश्वास गर्न वास्तवमा राम्रो छ लाग्छ। Bangmakerij हामीलाई साना बुथमा राख्छ।
मलाई लाग्छ किसानहरू दिन प्रतिदिन विरोध प्रदर्शन गर्छन् तपाई सजीलै देश भर सपाट। यदि तपाईं एक धेरै ठूलो समूह संग भुक्तानी (कर) रोक्नुभयो भने, त्यसोभए उनीहरूले वास्तवमै केहि गर्न सक्दैनन्। के तपाई हाम्रो सरकारले हेगमा बिना तलब काम गर्ने क्रममा लाग्छ? के तपाईंलाई लाग्छ कि विम लेक्सले भुक्तान नगरेको रिबन काट्छ? निश्चित रूपमा थाहा छैन, तिनीहरू त्यहाँ छन् किनकि हामी सबै यो चाहन्छौं र तिनीहरूलाई यो सबै राम्ररी थाहा छ। हरामीहरूले दिनभर गुनासो गरिरहेका छन् तर जब मार्क वा विम लेक्सको साथ आउँछ तिनीहरू झण्डा लिएर अगाडि उभिन्छन्।
जसरी हामी लाग्छौं हामी जागा छौं, हामीले आफैलाई दिनदिन सोच्न लगाउनु पर्छ कि हाम्रो विचारहरु बाह्य रूपमा प्रभावित हुँदैनन्।
मैले यस लेखलाई सकारात्मकको रूपमा देखेको छु, टिभी, अखबार, रेडियो र स्मार्टफोनबिना यो सुन्दर संसारमा एकदम राम्रो दिन हो 😎
7 अक्टोबर 2019 मा 10: 43
अब 5G विषयलाई ब्रान्ड 'दायाँ' (दायाँ-वि wing्ग) लाई बोरिस जोसनले मार्फत जोड्दैछ र आलोचना चाँडै अन्तमा स्मोद गरिनेछ:
7 अक्टोबर 2019 मा 20: 58
स्वतन्त्र बोलीको अन्त्य
मिडियाले तपाईंलाई पुस्पिनहरू निग्न दिन्छ यदि आवश्यक छ भने, जन प्रचार
मिडिया जहिले पनि सहि छ, यो चर्चको पादरी जस्तो छ, यो वास्तविक हुँदै गइरहेको छ, छोटो चलचित्र मुनिको हेर्नुहोस्, हामी यहीं छौं
« 'जलवायु अस्वीकार' कलंक साजिश सिद्धान्त, दक्षिणपन्थी राजनीति र पेटको भावना संग जोडिएको छ
विलुप्त विद्रोह सशुल्क कार्यकर्ताहरूको एक समूह »
कुल भ्रमण: 12.977.124
क्यामेरा2op रुइनरवोल्ट ड्रेन्थे र उनको परिवार, अर्को मनोवैज्ञानिक अपरेसन (साइकोप) अधिक पुलिस राज्यतर्फ
AllesGatatKapot op रुइनरवोल्ट ड्रेन्थे र उनको परिवार, अर्को मनोवैज्ञानिक अपरेसन (साइकोप) अधिक पुलिस राज्यतर्फ